Ny finoana silamo te haka ny tany Soeda | Apg29
Ny finoana silamo te haka ny tany Soeda
Misy ady ara-panahy ho an'ny tany, teo anelanelan'ny Kristianisma sy ny finoana silamo.
Maro ny Silamo tao anatin'ny taona vitsivitsy eto amin'ny firenentsika no efa nifidy ny toro lalan'ny Baiboly, lavitry ny fankahalana sy ny herisetra. Izany no lafiny tsara ny zavatra, raha ny Islamista Mitombo ny fandrahonana.
Integration - fototra olana
Mitarika ny mpanao politika ankehitriny miresaka momba izany dia lehibe fampidirana olana. Mazava àry fa mety hoe sarotra.
Mazava, fa tsy dia mahay mba haka kely ny olana lehibe. Inona no azontsika atao momba izany raharaha lehibe? Ny mampalahelo valiny dia "tsy tena" na "saika na inona na inona".
Ny antony Fa izao no tafahoatra koa ny mpahay siansa, ny Profesora Ruud Koopman namarana. Manana maherin'ny 20 taona sy ny fikarohana ny fampidirana voaray am eo silamo tany Eoropa.
Ao amin'ny gazety norvejiana Document dia afaka mamaky izay ny tonga amin'ny. Ny famaranana dia: ny finoana silamo tsy mamela mihavana amin'ny demokrasia sy ny fiaraha-monina Tandrefana. Tsy isalasalana fa sarotra ny mampiditra Silamo noho ny vondrona hafa ny mpifindra monina ao amin'ny fiaraha-monina tandrefana.
Efa tamin'ny 2013 dia namoaka tatitra Koopman amin'ny fanadihadiana dia mampiseho fa miaraka roa ampahatelon'ny olona nanaovana fanadihadiana ara-pivavahana silamo mino fa fitsipika dia zava-dehibe kokoa noho ny lalàna ao amin'ny firenena izy ireo miaina ao.
Tsy misy ny fiaraha-monina tandrefana no nahavita fampidirana silamo. Noho izany, dia ny fiheverana fa Soeda dia hahatratra ny zavatra tsy misy hafa firenena nahomby.
Ny antony dia satria izany dia momba ny kolontsaina hafa, ny fivavahana, ary ny fisainana izay mifanohitra amin'ny fiaraha-monina ny soedoà.
Ny vahaolana dia, na izany aza, ary izany no ho silamo rehefa niova ho amin'ny finoana kristianina. Maro ny ohatra izay efa dingana izany, efa nahavita ny tsara indrindra mampiditra an-fiaraha-monina.
Na dia teo aza izany, dia mifidy ny Birao Fikisahana mbola mba handroaka ny maro amin'ireo niova fo kristianina, raha ny maro - ireo izay tsy te-mampiditra - sisa. Mety no ho voka fahadisoana!
Raha toa ianao rehefa mandre ny anaram-boninahitra ka mamaky ity lahatsoratra ity, ka jereo ohatra ny zava-mitranga eto amin'ny firenentsika.
Soheila Fors manana manaitra NY utet, izy Teraka tany Iran, ary tonga tatỳ aoriana any Soeda. Ankehitriny izy dia tsy miovaova ary manana traikefa Kristiana ny finoana silamo na ny finoana kristianina. Ao amin'ny lahatsoratra iray ao amin'izao tontolo izao ankehitriny dia milaza amintsika momba ny zava-nitranga iray:
"Ary tamin'ny kianja rehefa nanana ny Komitim-pifidianana dia mba nankao hiatrika ahy. Ny efitra lamba nipetraka tsara, toy ny manambany tsiky. Dia nanomboka ny resaka fa tsy misy resaka tsy misy mihaino. , Saingy efa tsy nahazo na aiza na aiza, tonga ny fotoana handrahona: tonga eto isika mba handray ny. Tsy misy olona tokony hanana hianatra Soedoa, ny olon-drehetra dia tokony miteny arabo. Rehefa manana fahefana, koa ho voatery hanao ny efitra lamba.
Ny antso nanome ratsy tsiro teo am-bavako, satria efa nihaona maro tahaka azy imbetsaka. Izany no didy jadona ara-pivavahana biby fiompy izay haneno mandrakariva izany, na eo amin'ny taona 1980 Iran ao amin'ny 2020 ny Soeda. "
Homenay hafa sary Soeda, izany hoe avy any Hjällbo, iray manamorona an'i Göteborg. Izao tontolo izao ankehitriny dia manome sary ny zava-nitranga, rehefa Kristianina telo Evanjely tsy tao an-kianja.
Ary nisy lehilahy avy amin'ny andian-jiolahy sy ny hoe: "Manana telo minitra mba hitondra anareo avy eto, na mitifitra anao aho."
Ary ny zava-nitranga natao nandritra ny Ramadany sy ny jiolahy ihany koa dia naneho fa "fifadian-kanina rehetra eto. Silamo izahay. Tsy tiako eto. "
Ireto manaraka ireto ireo fanehoan-kevitra nandaharanao teny ny silamo: "Tonga eto izahay mba haka ny" sy ny hoe "Tsy mila anao eto."
Midika izany fa misy ady ara-panahy ho an'ny tany, teo anelanelan'ny Kristianisma sy ny finoana silamo. Izany dia fotoana izao ho an'ny Kristianina avo sy ny mpanao politika mba hifoha ka handray zava-nitranga ireo ho zava-dehibe.
Mitombo ny Islamista ao Soeda
Tsy misy tokony hieritreritra fa ny Soeda dia voaro amin'ny zorony 'izao tontolo izao ny fitarihan'ny islamista. A SAPO tatitra mampiseho ny fitomboan'ny maranitra ny Islamista ao Soeda.
Ao amin'ny TV, teletext sy ny haino aman-jery maro hafa mety ho Jona 11 handray anjara ny FBI manaitra ny olo-malaza eo amin'ny isan'ny Islamista any Soeda.
Fredrik Hallstrom, lefitra lohan'ny an'ny ady hoe: "Isika miahiahy ny amin'ny fitomboana." Misy koa voalaza ao amin'ny tatitra: "Ny fahefana ankehitriny mitranga ny fanafihana misy ifandraisany amin'ny isan'ny ifotony Islamista any Soeda nitombo mafy tao anatin'ny taona vitsivitsy, avy amin'ny an-jatony ho an'arivony. Tamin'ny May, efa manana malaza Islamista enina no voasambotra. "
Misy an'arivony ankehitriny (!) Islamista in Soeda. Ny iray ireo no azo lazaina ho anisan'ny mety ho loza mitatao ho amin'ny fiarovana ny firenena. Izany angamba resaka fotsiny alohan'ny fotoana dia afaka manomboka mahita hiringiriny islamista hanao zavatra amin'ny fomba rehetra.
Nisy maranitra nitombo ny isan'ny Silamo any Soeda tao anatin'ny taona vitsivitsy.
Ao taorian'ny manaraka izany ihany koa ny fitomboana maranitra silamo. Ny Islamista vonona ny hanao na inona na inona amin 'ny anaran' ny zavatra inoana ara-pivavahana, anisan'izany ny mitsoka ao amin'ny habakabaka mba hamono ny olon-kafa.
Tamin'ny volana Jona, ny Security Service handroaka roa Imams (!): Iza no mavitrika ao amin'ny trano fivavahana. Mpikambana hafa ao amin'ny Islamista ifotony tontolo iainana ihany koa notazonin'ny ny Security Service.
Ny Silamo tsotra no tokony ho tia sy miezaka ny handresy ho an'i Jesosy. Fitiavan'i Jesosy manao silamo ho be fitiavana mpanara-dia an'i Jesosy fa tsy ho lasa Islamista.
Raha mamaky izany no Silamo Tokony ho fantatrao fa ianao no tian'Andriamanitra. Koa manao toy izany koa raha maro tokoa ireo hafa sy hanokatra ny hafatry ny fitiavana.
Articles sy lahatsary izay zavatra nataon hafa noho Apg29 maneho ny heviny.